Somaliland.Org » 2008 » January
GABAY Rayaale U Soo Dhiibay Heblaayo Dacar
Monday, January 28th, 2008 Comments Off
Niskii dambe ee xalay aniga oo u kacay Salaatu laylkii, ayaa waxaan ku riyooday riyo mar aan la yaabay marna aan ku qoslay…. Riyadaasi waxay ahayd, waxaan goor barqo ah galay xarunta Madaxtooyada, oo aan u sii dhaafay xafiis dhinaca Waqooyi u jeeda oo Madaxweynaheenu Daahir Rayaale Kaahin fadhiisto. Markii aan galay ayaa waxaan ugu […] Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Isniin 28 January
Ciidamadii jiidda hore ee Puntland oo dib ugu jeestay, Islamarkaana qabsaday Garoowe Garoowe (Ogaal/W.Wararka) – Ciidamo gadoodsan oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka, Islamarkaana ka mid ah ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa shalay xoog ku qabsaday Bangigaga dhexe iyo qaybo badan oo ka mid ah magaalada Garowe. Sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno magaalada Garoowe, […] Jawaab: Todobaadka iyo Mucaaradka Somaliland
Hossain Eryal Ciidamo Wata Tikniko Oo Xoog Kula Wareegay Bangiga Dhexe Ee Garowe
Garowe (Somaliland.Org) Ciidamo gadoodsan oo isagu jira ciidamadda Booliska iyo kuwa milatariga Puntland ayaa maanta xoog kula wareegay Bangiga dhexe ee Puntland, kaaso ku yaala caasimadda Garowe. Ciidamaddan oo ku hubsyana gawaadhida loo yaqaano tiknida iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee culus ayaa la wareegay gebi ahaan Bangiga dhexe. Ujeedada ka danbaysa qabshashada ciidamada ee […] Xogaha iyo Xifaalaha Socdaallada Madaxweyne Riyaale – Faallo, Q. 2aad
Sunday, January 27th, 2008 Comments Off
Nin reer Awdal ah ayaa isagu kelmedo kaftan ah ku darsaday dhallinyaro faallaynaysa safarkan u dambeeyey Madaxweynuhu ugu kacay Maraykan, iyada oo qaar badan oo ka mid ahi isugu jiibinayaan in rajo weyn oo aqoonsi uu halkaa ka soo ururayo….Waxa uu yidhi, “Ilmaadeerayaal, Aqoonsigu waa iska ooraydhe, annagu waanu ka cabanaynaa booqashooyinkaa Madaxweynaha oo dhibaato […] <